ဘီယာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ - ဘီယာရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည် စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
သငျသညျ (ကဖန်ခွက်, ဘူး, ပုလင်းသို့မဟုတ်ဘူး၌ဖြစ်စေ) ၌၎င်းကိုပျော်မွေ့သောသူသန်းပေါင်းများစွာ၏တ ဦး တည်းဖြစ်လျှင်, သင်ဘီယာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိရန်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ဤသောက်သုံးမှုသည်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသော်လည်းစားသုံးမှုကိုမှန်ကန်စွာချဉ်းကပ်မှသာလျှင်သင့်တော်ပါသည်။.
ဘီယာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်အကြီးဆုံးအဖျော်ယမကာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အားသာချက်များကိုထောင်နှင့်ချီ။ မထည့်ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသူတို့သိသင့်သည်။ အောက်ပါတို့မှာဘီယာသောက်ခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ခြင်းမှသင်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများအထိဖြစ်သည်။
1.3 နှလုံးရောဂါအတွက်အိုမီဂါ 3
ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်ဘီယာကိုမဟာမိတ်အဖြစ်ညွှန်ပြသည့်လေ့လာမှုများရှိသည်။ သုတေသီအချို့၏အဆိုအရဘီယာသည်သင်၏သက်တမ်းကိုရှည်စေပြီးရောဂါများနှင့်ကျန်းမာရေးပြpreventနာများကိုကာကွယ်နိုင်သည် (အချို့အလွန်လေးနက်သည်), နှလုံးရောဂါကနေလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်သန်းကျောက်ကပ်ကျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်းရန်။ ကင်ဆာရောဂါအကြောင်းပြောဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သော်လည်းဘီယာတွင်ပါဝင်သောအရာအချို့သည်ဤရောဂါကိုကုသရန်အထောက်အကူပြုနိုင်မနိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်လေ့လာမှုများထပ်မံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
နေ့စဉ်ဘီယာသောက်ခြင်းသည်ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် ဒီရေပန်းစားတဲ့သောက်သုံးခြင်းကဆီးကိုပျော်ဝင်စေတယ်.
ဘီယာစားသုံးမှုသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနိမ့်ကျမှုကိုဆက်စပ်စေသောလေ့လာမှုအချို့လည်းရှိသည်။ သွေးလွှတ်ကြောများသည်ပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ၎င်းဖြစ်သည့်အခါနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။ သို့သော်ဘီယာသောက်ပါကသင်၏နှလုံးကိုကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ အန္တရာယ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိလျှော့ချနိုင်သည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိသည်။ သင်ဘီယာကိုပုံမှန်စားသုံးသူဖြစ်လျှင်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်မပြုခြင်းသည်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ အိုမီဂါ3အကျိုးကျေးဇူးများ။ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်ဤကျန်းမာသောအဆီပါဝင်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း၎င်း၏အားသာချက်များမှာများစွာရှိသည်။ မတူကွဲပြားသောအစားအစာများမှတစ်ဆင့်သင်၏အစားအစာထဲသို့အလွယ်တကူမည်သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတို့အားရှာဖွေလေ့လာပါ။
ဘီယာသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်သို့သွေးနှင့်အောက်စီဂျင်စီးဆင်းမှုကိုသွေးခဲခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့သောအခါလေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၅၀ ရာနှုန်းအထိမသောက်သူများ၏ပြောဆိုမှုသည်သောက်သုံးသူများမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာဘီယာသည်သွေးလွှတ်ကြောများသို့ယူဆောင်လာနိုင်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာလည်းသောက်တယ် ၎င်းသည်သွေးလည်ပတ်မှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပြီးသွေးခဲခြင်းကိုကာကွယ်ရာတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်, လေဖြတ်ခြင်း၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်သော။ ဘီယာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးထဲကဒီဟာကစိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရဲ့ဘီယာ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူဆက်လက်ကြပါစို့။ ကျောက်ကပ်ကျောက်များ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းများအပြင်ဘီယာစားသုံးမှုသည်ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ တွင်ဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်နှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်ပတ်သက်လျှင်ဘီယာကလည်းပြောစရာရှိသည်.
အရက်ယမကာအားလုံးကဲ့သို့ဘီယာသည်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ အလုပ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်တွင်တစ်ကြိမ်ကိုတစ်ချောင်းယူခြင်းကသင့်အားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပေါင်းသင်းရန်ကူညီပေးသည်၊ သို့သော်အလုပ်များသောနေ့နောက်ပိုင်းတွင်သင့်အားပိုမိုငြိမ်သက်မှုနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိမှုကိုခံစားရစေသည်။
အလုပ်ပြီးနောက်ကောင်းသောခံစားမှုအပြင်ဘီယာသည်သင့်အားကောင်းသောညအနားယူရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘီယာ dopamine ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သော်လည်းအိပ်ပျော်ရန်၎င်းကိုမှီခိုရန်မသင့်လျော်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးပြaနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအချက်များ။ ထိုတွင်သင်သည်ညအချိန်တွင်ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအနားယူခြင်းကိုမည်သို့ခံစားနိုင်မည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများကိုအာမခံချက်များဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက်ဘီယာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းသိသာစေသည်။ ယခုလက်ရှိတွင်စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့သောအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏ဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောနာရီအားလုံးကြောင့်မျက်စိသည်အထိခိုက်လွယ်ဆုံးအာရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏မျက်လုံးများကိုကာကွယ်ရန်အသိအမှတ်ပြုထားသောအစားအစာများနှင့်သောက်စရာများကိုကြိုးစားခြင်းဖြင့်သင်ဘာမျှမဆုံးရှုံးပါ။ ပြီးတော့ဘီယာလည်းသူတို့အလယ်မှာရှိနေတယ်။ ၎င်း၏ antioxidants သည်ကောင်းသောအမြင်တွင်အမြင်အာရုံကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်၎င်းသည်မျက်စိအတွင်းတိမ်ကဲ့သို့သောရောဂါများမှကာကွယ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ဘီယာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ